bilaabista kiraysi - Tenants Victoria
[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black” ]heshiiska kiraysiga
oggolaanshahaaga ogaysiisyada elektarooniga ah
waraaqaha ay tahay inaad hesho
kiro [/feature] [/column]
Heshiis kiraysi (mararka qaar loo yaqaan ‘kiraysi guri’) wuxuu noqon karaa qoraal ama mid afka la iska dhaho. Wuxuu noqon karaa mid muddo go’an (sida 6 ama 12 bilood) ama mid kolba la cusboonaysiiyo (sida badan bil kasta).
Heshiisyada muddada go’an aad ayey u ammaan badan yihiin sababtoo ah waxay ku adkeeyaan mulkiilaha guriga inuu guriga kaa saaro, laakiin qaali ayey noqon karaan haddii aad doonto inaad guriga ka baxdo kahor inta wakhtigii lagu heshiiyey aanad dhammaysan. Gal kaliya heshiiska muddada go’an haddii aad hubto inaad rabto inaad dhammaysanayso muddada lagu heshiiyey.
Hubi inaad ku faraxsan tahay xaaladda hantida inta aanad bixin wax lacag ah ama aanad u soo guurin. Haddii mulkiilaha gurigu oggolaado inuu dayactiro ama hagaajiyo hantida kahor inta aanad u soo guurin (sida galinta kulayliye), hubi inuu kujiro heshiiska kiraysiga ama ballanqaadka qoraal ka dhig.
Haddii uu jiro heshiis kiraysi oo qoraal ah, waa in lagu siiyo nuqul kahor inta aanad saxeexin. Haddii ay daruuri tahay, talo raadi inta aanad saxeexin, gaar ahaan haddii ay jiraan ‘qodobo dheeraad ah’ oo la socdaa. Waa in lagugu siiyo nuqul heshiiska ah 14 maalmood laga bilaabo saxeexidda.
oggolaanshahaaga ogaysiisyada in laguugu soo diro elektarooni ahaan
Markii aad saxeexdo heshiiska kirada, mulkiilahaaga gurigu ama wakaalada hantidu wuxuu ku waydiin karaa inaad oggoshahay in mulkiilaha gurigu kuugu soo diro ogaysiisyada elektarooni ahaan (tusaale ahaan, iimeyl ahaan). Waxa dhici karta inay ku daraan qayb tan kusaabsan heshiiskaaga guriga. Waa inaad kaliya tan oggolaato haddii aad si joogto ah u hubiso iimeyladaada. Waa inaad hubiso in cinwaanka iimeylka ee uu u soo diri doono ogaysiisyadu uu cayiman yahay. Sidoo kale waa inaad ka fekerto haddii ay jirto halis in iimeyl ka socda mulkiilaha gurigu ama wakaaladiisu uu u weecan karo fooldharka spam-ka ama uu soo geli waayo xajmigiisa dartii.
Khasab kuguma aha inaad oggolaato ogaysiisyada in laguu soo diro elektarooni ahaan, laakiin haddii aad oggolaato waad ka laaban kartaa oggolaanshaha haddii aad isbeddesho mustaqbalka.
Haddii aad ka laabato oggolaanshahaaga adeegga elektarooniga ah, waa inaad hubiso inaad haysato caddayn ah inaad ka laabatay heshiiska. Tusaale ahaan, hayso nuqul ah iimeylka ama warqadda aad ugu sheegtay mulkiilaha guriga inaanu ogaysiisyada kuugu soo dirin si elektarooni ah.
Bilawga kiraysigaaga, mulkiilahaaga gurigu waa inuu ku siiyo: [list type=square_list]
Kiraysiga Guri: hage loogu talogalay kiraystayaasha tenants (buug-yare ka socda Consumer Affairs Victoria)
haddii aad bixisay deebaaji, foomka deebaajiga degganaanshaha guriga iyo laba 2 nuqul oo ah Warbixinta Xaaladda oo dhammaystiran, oo uu saxeexay mulkiilaha guriga ama wakaalo
magaca dhammaytiran, cinwaanka, lambarada taleefanka iyo faakaska mulkiilaha guriga
haddii uu jiro wakaalo, bayaan qoran oo kusaabsan haddii wakaaladu uu oggolaan karo ama aanu oggolaan karin dayactirka degdegga ah, iyo xaddiga uu oggolaan karo
lambar taleefan oo xaaladda gurmadka ah oo loogu talogalay mulkiilaha guriga, ama lambaro taleefan ama faakas oo loogu talogalay wakaalada, haddii ay dhacdo in loo baahdo dayactir degdeg ah.
Haddii aad bixiso deebaaji mulkiilaha gurigu waa INUU ku siiyo 2 nuqul oo warbixinta xaaladda ah KAHOR inta aanad soo guurin. Warbixinta waa inuu saxeexay mulkiilaha gurigu, ama wakaaladiisu, oo ay muujinaysaa xaaladda dayactirka iyo xaaladda guud ee hantida (gudaha iyo dibadda labadaba) markii warbixinta la diyaariyey.
Markaa adigu waxaad haysataa 3 maalmaha shaqada ah laga soo bilaabo taariikhda aad u soo guurto guriga inaad dhammaystirto oo aad saxeexdo warbixinta xaaladda kuna soo celiso mid kamid ah nuqulada mulkiilaha guriga ama wakaaladiisa.
Warbixinta Xaaladda waxa loo arki karaa caddayn gunaanad ah ee xaaladda hantida wakhtiga aad u soo guurto. Sidaa darteed kahor inta aanad saxeexin soona celin nuqul warbixinta ah waa inaad indha-indhayso hantida oo aad qoraal ka samaysato wixii dhibaatooyin ama mushaakil jira labada nuqulba, gaar ahaan halka aragtidaadu ka duwan tahay ta mulkiilaha guriga ama wakaaladiisa, tusaale ahaan uskad ku yaala roogga oo aan la sheegin markii hore. Tani waa muhiim maadaama Warbixinta Xaaladdu kaa caawin karto inaad iska difaacdo in deebaajiga wax laga goosto ama magdhaw aaad bixiso waxyeelada darteed ama kharashka nadiifinta marka aad guriga ka baxayso.
Haddii aanay jirin meelo wax lagu qoro foomka warbixinta xaaladda, qor ‘fiiri lifaaqa’ qaybta la xidhiidha oo ku lifaaq xaashi dheeraad ah.
Marka aad dhammaystirto, saxeex oo ku soo celi nuqul mulkiilaha guriga oo adiguna hayso nuqulka kale adigoo dhigaya meel ammaan ah waa intaayoo aad u baahato dhammaadka muddada kiraysigaaga.
Sawiradu waxay noqon karaan waxa ugu fiican si aad u muujiso xaaladda hantida. Waxaanu ku talinaynaa inaad sawiro badan ka qaaddo hantida markii aad u soo guurto, iyo markii aad ka guurayso, si aad u hesho caddaynta sida hantidu ahayd markii aad soo gashay iyo markii aad ka baxday.
Haddii kiradaadu tahay $350 ama ka yar toddobaadkii, mulkiiluhu kuma waydiin karo inaad bixiso deebaaji ka badan bil kiradeed.
Inta badan, laguma waydiin karo deebaaji iyo dammaanad oo wada socda. Haddii aad tahay, wixii talo ah nala soo xidhiidh.
Markii aad bixiso deebaajigaaga, mulkiilaha guriga ama wakaaladiisa WAA inuu dhammaystiro oo uu saxeexo foomka Lacagta Deebaajiga ah oo uu ku siiyo foomka si aad u saxeexdo. WAA inay markaa geeyaan foomka iyo lacagta deebaajigaaga Hay’adda Deebaajiga Kiraysiyada Guryaha 10 maalmaha shaqada ah gudahood. Hay’adda Deebaajigu waxay kuu soo diri risiidh 15 maalmaha shaqada ah gudahood markii ay helaan.
Haddii kiradaadu tahay $350 ama ka yar toddobaadkii kirada ugu badan ee laguu sheegi karo inaad bixiso waa bil qaddin ah. Laakiin haddii heshiiskaaga kiraysigu dhigayo in kirada aad toddobaadle u bixinayso, inta ugu badan ee laguu sheegi karo inaad bixiso waa 2 toddobaad oo qaddin ah.
Haddii kirada adigoo wada aad keento, waa in lagu siiyo risiidh isla markiiba. Haddii aad isticmaasho hab kale oo aad kirada ku bixiso oo aad codsato risiidh markii aad lacagta bixinayso, waa in lagugu siiyo risiidh 5 maalmaha shaqada ah gudahood. Xiitaa haddii aanad codsan risiidh kolkaasi, waxaad wali codsan kartaa diiwaan muujinaya bixinta kirada 12 bilood gudahood ee taariikhda bixinta lacagta. Waa in lagu siiyo nuqul diiwaanka ah 5 maalmaha shaqada ah gudahood ee markii aad codsatay. Waa sharci darro diidmada bixinta risiidhadu.
Sidoo kale waa sharci darro wakaaladu (ama cid kale oo ay kujirto cid saddexaad) inay maamusho soosaarista kaadhka bixinta lacagta kirada ee koowaad ama u abuurto iyo/ama isticmaasho xarumo dhibitka tooska ah oo lacagta kirada lagu shubayo.
Xeerka Kiraysiga Guryaha 1997 (WebsaytkaAustLII)
Qaybta 29 – nuqulada heshiiska ee la siinayo kiraystaha
Qaybta 31, 32, 33 – deebaajiga ugu badan
Qaybta 35 – warbixinta xaaladda
Qaybta 36 – warbixinta xaaladdu waa caddayn xaaladda dayactirka
Qaybta 37, 38 – dammaanadaha
Qaybta 40, 41 – kirada qaddinka ah
Qaybta 51 – maamulista kaadhadhka bixinta lacagta kirada/dhibitka tooska ah
Qaybta 66 – bayaanka xuquuqda iyo macluumaadka mulkiilaha guriga / wakaalada
Qaybta 406 – waajibaadka bixinta deebaaji
Starting a tenancy | Somali | March 2019